Miaraha miasa amin'ny ekipa ary miasa miaraka amin'ny Slack. Mifampiresaka amin'ny tena fotoana
Posted by Tranquillus | Jan 25, 2020 | Office
Noho ny antony maro samihafa dia mety mila ny mpikambana ao amin'ny orinasa iray miara-miasa lavitra. Ohatra, mety misy mpikambana mivelona na mety hikatona ny toerana aorian'ny fitokonana. Mba hahafahan'ny mpiasa manohy ny asany ara-dalàna sy hifanerasera, ilaina ny fampiasana fitaovam-pifandraisana toy ny Slack.
Inona no atao hoe Slack?
Slack dia sehatra amin'ny Internet mamela azy ireo serasera ifandraisan'ny mpikambana ao amin'ny orinasa iray. Izy io dia manolotra ny tenany ho safidy mora kokoa amin'ny mailaka anatiny amin'ny orinasa. Na dia tsy lavorary aza izany ary ny tsikera sasany azo anaovana azy, dia manintona orinasa maro kokoa.
Ny Slack dia ahafahana mampita vaovao amin'ny fotoana tena izy, ary io, amin'ny fomba tsotra kokoa raha oharina amin'ny mailaka. Ny rafi-pifandraisana dia ahafahanao mandefa hafatra ankapobeny sy manokana. Izy io koa dia manolotra tranga maro toy ny fizarana rakitra (lahatsoratra, sary, horonantsary, sns) ary horonan-tsary na audio fifandraisana.
Raha hampiasa azy dia midira fotsiny amin'ny sehatra ary mamorona kaonty. Hahazo fidirana amin'ny dikan-teny maimaim-poana amin'ny Slack ianao avy eo izay efa manolotra endri-javatra marobe. Avy eo ianao dia afaka mandefa fanasana amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ireo mpikambana tianao hampidirina ao amin'ny vondrona miasa anao.
Ny sehatra dia manana eritreritra tsara sy famoronana ergonomika. Mba hahafahana miasa tsara, na izany aza, misy vitsivitsy fohy azo ampiharina mba tsy hotsarovana, nefa tsy dia manahirana. Ankoatra izany, azo atao ny miasa ao Slack miaraka amin'ny solosaina, Smartphone na takelaka.
HAMAKY Microsoft PowerPoint: mahatakatra ny mahasoa sy ny fampiasana azy.
Mifampiresaha amin'i Slack
Ao amin'ny sehatr'asa tsirairay noforonin'ny orinasa iray eo amin'ny lampihazo dia azo atao ny manamboatra zoro fifanakalozana fifanakalozana antsoina hoe "rojo vy". Ireo lohahevitra dia azo omena azy ireo mba hahafahan'izy ireo manangona araka ny hetsika ao anaty orinasa iray. Azo atao tsara ny manangana rojo ho an'ny kaonty, varotra, sns.
Azo atao koa ny mamorona rojo ahafahan'ny mambra manao varotra, na matihanina na tsia. Ka tsy misy fikorontanana, ny mpikambana tsirairay dia tsy maintsy miditra amin'ny fantsona mifanaraka amin'ny zavatra ataony ihany. Ohatra, ny mpamorona sary dia mety hiditra amin'ny fivarotana na fivarotana varotra miankina amin'ny fomba fiasan'ny orinasa.
Ireo izay te hiditra amin'ny fantsona dia tsy maintsy mahazo alalana aloha. Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrona iray dia afaka mamorona roalahy fifanakalozan-dresaka. Saingy, mba hisorohana ny serasera tsy hikorontan-tsaina, dia azo atao ny mampiato ilay fampiasa io.
Ireo fantsona samy hafa nifampitana tamin'ny Slack
Ny fifandraisana dia afaka miorina amin'ny fomba 3. Ny voalohany dia ny fomba manerantany ahafahana mandefa ny fampahalalana amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny orinasa. Ny faharoa dia ny mandefa hafatra amin'ireo mpikambana amin'ny rojo vy iray fotsiny. Ny fahatelo dia ny fandefasana hafatra manokana, avy amin'ny mpikambana iray mankany amin'ny mpikambana hafa.
Mba handefasana fampandrenesana, dia misy vitsivitsy fohy atao ho fantatra. Ohatra, raha ny fampandrenesana olona tsy manam-paharoa amin'ny rojo iray dia azonao atao ny manoratra @ manaraka ny anaran'ny olona tadiavinao. Mba hampahafantarana ireo mpikambana rehetra amin'ny gadra iray dia misy ny baiko @ nom-de-la-chaine.
Raha te hampahafana ny mpiara-mianatra aminao momba ny sata (tsy mandeha, sahirana, sns) dia misy ny baikon'ny "/ sata". Ny baiko mahafinaritra hafa dia misy ankehitriny, toy ny chat / / giphy "izay ahafahanao mandefa GIF. Azo atao koa ny mampiavaka ny emojis na manamboatra robot (Slackbot) izay mamaly avy hatrany amin'ny fepetra sasany.
Ny lafiny ratsy sy ny fitsipik'i Slack
Slack dia manolotra tombony maro manomboka amin'ny mihena ny isan'ny mailaka anatiny amin'ny orinasa. Ankoatr'izay, ireo hafatra nafanakalozana dia voatahiry ary ho mora jerena avy amin'ny fisavana. Misy safidy misimisy kokoa na tsy mahasoa koa dia misy miaraka amin'ny ohatry ny #hashtag izay mamela anao hahita mora.
Azo sokafana amin'ny Smartphone, mamela anao koa izy io miasa avy amin'ny toerana rehetra. Ankoatr'izay, dia manolotra fampirimana amin'ny fitaovana maro toy ny Dropbox, Skype, GitHub ... Ireo fampidirana ireo dia ahafahanao mahazo fampandrenesana avy amin'ireo sehatra hafa ireo. Slack dia manolotra API manome alalana ny orinasa tsirairay manosika ny fifandraisany amin'ny lampihazo.
Raha resaka lafiny ny filaminana, ny sehatra no miantoka fa tsy tokony hampandefitra ny data ny mpampiasa azy. Ka eo encrypts data mandritra ny fifindrany sy mandritra ny fitahirizana azy ireo. Mivoatra ny rafitra fanamarinana, ary manamaivana ny mety hisian'ny hacking. Izy io dia sehatra iray ifanajana ny fiainana manokana.
Na izany aza, na dia toa mahazo tombony betsaka aza i Slack, dia mety tsy mahaliana ny rehetra izany. Ohatra, mora kokoa ny sosotra amin'ny hafatra sy fampandrenesana eo amin'ny lampihazo. Ankoatr'izay, namboarina amina fanahy akaiky kokoa ny tanora vao manomboka. Noho izany ny orinasa nentim-paharazana bebe kokoa dia tsy ho voataona tanteraka amin'ny vahaolana atolotra.
HAMAKY Word processing software
Slack: Fampidirana sy famelabelarana # 1
Tapaka: Ampiasao ny latsa-bato # 12
Miaraha miasa amin'ny ekipa ary miasa miaraka amin'ny Slack. Mifampiresaka amin'ny tena fotoana May 17th, 2020Tranquillus
Teo alohaMiasà lavitra miaraka amin'ny TeamViewer mandritra ny fitokonana
manarakaNy karazany samy hafa amin'ny andiany, rahoviana ary ny fomba hanararaotra azy ireo?
Lasa mpikirakira fikarohana Google
Excel Tips Voalohany - Doping Your Productivity
Toro-hevitra voalohan'ny ampaham-potoana